Ophahleni in the okugeza: yini ukuphakama elikhulu?
Abaningi okugeza abalandeli ekwakhiweni yayo bakhathazekile ukuphakama elikhulu ophahleni. Yini ukuphakama kufanele kube ophahleni in the okugeza? Ngokusho kochwepheshe, impendulo ocacile wokuba yalo mbuzo kunzima ukuthola - ukucabangela timvo letehlukene. Ceiling ukuphakama okugeza kuxhomeke kakhulu uhlobo eziyinkimbinkimbi okugeza. Ngokwesibonelo, kukhona abo, kuze kube-Finnish sauna okugeza for Russian - le.
Lapho ukwakha sauna kungcono kakhulu ukunikeza ophahleni ngenhla nje ukuphakama womuntu. Sauna kufanele kube ntofontofo. Ibanga kusuka phezulu eshalofini ophahleni kufanele ehla enyuka phakathi 100-120 ibhekisele kumuntu ohlezi kuso, hhayi wathola ukulimala ekhanda. sauna Finnish - okugeza hhayi Russian. Ceiling ukuphakama kungaba khona (210 ukuze 230 cm) amancane. Phela, i-sauna kungamukelwa wendiza umshanelo - udinga nje ahlale eshalofini futhi yokuthamela.
Ngokusho idatha zomlando, ekuqaleni kwekhulu XX zokugeza Russian babe usayizi umxhwele. Ngokwesibonelo, unjiniyela Priorova izincomo zisho ukuthi, kanye endaweni enkulu kufanele kube phezulu kanye ophahleni in the okugeza. Ubukhulu of amakamelo akulesi okugeza Russian ngesikhathi ingafaniswa izakhiwo samanje wosayizi omkhulu (Igumbi sigqoka - 7.3 cubic metres umuntu, umusi okugeza nokugeza ngalinye - at 19.5 cubic metres, uphahla ukuphakama zokugeza - 310 cm).
Namuhla, abakhi abanolwazi bathi: "Le ezincane ivolumu egumbini umusi, le kusheshe futhi kube lula ke efudumele." Kodwa lokhu akusho ukuthi ukushisa kuyoba kokuhlala isikhathi eside guy encane.
Phakathi kwekhulu lamashumi amabili, ophahleni in the okugeza kaningi ngaphezu ukwenza ongaphakeme - 170 cm Isizathu salokhu iqhinga ubunjiniyela kwaba ukulondoloza okulula izinkuni ..
Modern wokwakha ubuchwepheshe (izitofu, ama-heater, umusi) ngokushesha kulungele lo umusi amakamelo zinkulu ngokwanele futhi eside ukuzigcina efudumele. Futhi uma ucabangela ukuthi namuhla ungakwazi ukuthenga zonke izinhlobo ukwakhiwa kanye izinto kokuqeda, igumbi umusi kumele kwenziwe ngokuvumelana nemithetho.
Futhi imithetho ufunde kanje: in Russian okugeza umusi kumelwe buthelela ngaphansi ophahleni. Lapho lo mehluko lokushisa ezingqimbeni yasenhla nemithombo yasenzansi kungaba mikhulu, kuze kube degrees 50. Ukuze sinikeze ngamazinga ahlukene efudumele, emashalofini ahlelwe amazinga eziningana.
Kuyaziwa ukuthi inqubo okugeza (ngaphandle ukupholisa umusi) luyoqhubeka eside, uma okusezingeni eliphezulu ophahleni okugeza. Ngakho-ke, efanayo labo amamitha amathathu, okuyinto Kunconywa dei priori - hhayi ukungcebeleka kodwa kudingekile. Uma efika ophahleni amanzi okugeza ongaphakeme, umusi ngokushesha dissipates lapho umshanelo lokuqala ukubhakuzisa. Umnikazi okugeza esinjalo kungase eside ukuthola imbangela Ukupholisa okusheshayo egumbini umusi - ukuhlola isithiyo umusi, funa imifantu futhi punctures kwesakhiwo - kodwa kamtholanga. A isidingo okwakubaluleke nje ukwandisa ukuphakama ophahleni elihlanza ngokuligeza 30-40 cm!
Kulokhu okungenhla kuyacaca ukuthi iziqondiso eziqinile mayelana ukuphakama ophahleni okugeza akekho. Kodwa akufanele kube liphansi kakhulu. Lena isizathu esisodwa ngaphezulu.
Phakathi ukwelashwa umusi okugeza akuyona umoya. Ngakho-ke, lo mkhulu umthamo yayo, kulapho-ke umoya nomoya-mpilo. Kubalulekile kakhulu ekuthuthukiseni umphumela ukuvakasha okugeza Russian.
Polystyrene extruded: izici, ukujiya, intengo kanye nokubuyekeza
Heater Modern ekhaya
Indlela yokwenza ukwahlukanisa of okwakhiwa ngalo la mabhodi?
Kungani awukwazi ukuthatha izithombe ulele?
Uphi international ejwayelekile amakhilogramu?
Ukuphuza Ukudla. Amazwana kanye nemibono.
Yesondlo Network. Ukugcina amanethiwekhi Inthanethi
Umshini Choreographic: usayizi. umshini Dance irowu
Awnings PVC isikebhe ngezandla zakhe indlela yokwenza?